▷ Apple's iPad 2021 dị ugbu a maka ọrịre naanị € 299 dị ka onyinye Epic na Amazon - TechRadar 2022
Apple's iPad 2021 dị ugbu a maka ọrịre maka naanị € 299 dị ka nkwekọrịta epic na Amazon.
Ndị Ọma, Ndị Ọjọọ na Ndị Ọjọọ
Amazon Prime Video (Video na-achọ); Lee Van Cleef, Eli Wallach, Clint Eastwood (Ndị na-eme ihe nkiri); Sergio Leone (onye nduzi)
Ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ego iPad dị ọnụ ala, ị nọ na chioma. Anyị ahụla iPad 2021 10.2-inch nke Apple na ngwaahịa yana ọ na-ere maka naanị $299 (site na $329) na Amazon. Nke a bụ ọnụahịa kacha ala anyị hụworo yana ọmarịcha nkwekọrịta maka mbadamba 64GB.
Ụdị iPad a kapịrị ọnụ siri ike ịchọta na ngwaahịa n'oge na-adịbeghị anya, ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkwekọrịta na Black Friday, ọ dịghị otu. Anyị amaghị ogologo oge Amazon ga-enwe iPad n'ọnụ ahịa a, yabụ were ohere nke nkwekọrịta a dị ugbu a tupu oge agafee.
Ahịa iPad kacha mma nke Apple ugbu a
2021 iPad nwere mgbawa A13 Bionic dị ike nke Apple wee malite na nchekwa 64GB, yabụ ị nwere ike chekwaa ọtụtụ ihe nkiri na budata ngwa na egwuregwu. Mbadamba ụgbụ a nke ọgbọ nke itoolu natakwara igwefoto n'ihu 12-megapixel emelitere yana gụnye njirimara Apple's Center Stage iji nyere gị aka ịnọ na etiti ahụ. Ị nwetakwa ihe ngosi Retina 10,2-inch, nkwado maka Apple Pencil na Smart Keyboard, yana ọmarịcha ndụ batrị ụbọchị niile.
Imirikiti azụmahịa iPad
Imirikiti nke iPad Kachasị Mma Taa
Ị nwere ike ịlele ndị ọzọ nke kacha mma ọnụ ala iPad amụọ, na ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Amazon ngwaọrụ, ị nwere ike ịlele kasị mma ọnụ ala Amazon Fire mbadamba ahịa.
Ị nwekwara ike na-atụ anya nnukwu azụmahịa na azụmahịa Super Bowl TV anyị na ntuziaka ahịa ụbọchị ndị isi 2022.
Ọ bụ ezie na iPhone 14 bụ ekwentị kacha ike na akụkọ ntolite, o zughị oke
Ọkụ 7 ọhụrụ nke Amazon ewepụtara dị ka ụzọ dị oke ọnụ ala karịa obere iPad mini
iOS 16 ga-agụnye ngwa Apple ọhụrụ na nnukwu mgbanwe
Atụla anya Google Pixel Fold n'oge ọ bụla n'oge adịghị anya
Nke a nwere ike ịbụ (* 13*) afọ m tụpụrụ iPad Pro m, ọ bụ maka gam akporo 13.
Nanị: Nke ahụ ziri ezi (* 10*) OnePlus Nord 2T, yana ọ nwere njiri mara mma nke 10 Pro.
Ntụle Ngwaahịa kacha mma